Order of Mapungubwe - How is Order of Mapungubwe abbreviated?
Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus - The Free Dictionary 11,912,864,859 visitors served
(redirected from Order of Mapungubwe)
Professor Quarraisha Abdool Karim, Associate Scientific Director of CAPRISA (Centre for the AIDS Programme of Research in South Africa) received the Order of Mapungubwe: Bronze by the South African State President on Freedom Day (27 April 2013) in recognition of her 'outstanding work in the field of HIV/AIDS and tuberculosis research and health policy development'.
(2) He received an honorary Master of Science degree from the University of Cape Town in 2003 as 'an extraordinary teacher and surgical craftsman', (3) and was presented with the Order of Mapungubwe in Bronze, South Africa's highest honour.
Cormack was subsequently honoured posthumously, the gold Order of Mapungubwe, South Africa's highest honour, being bestowed upon him in 1992, the same year that Nelson Mandela received a similar platinum award.
The handless surgeon
He was jointly awarded the Nobel Peace Prize in 1993 with Nelson Mandela, who were both awarded the order of Mapungubwe: Gold, for contributions to the peace process, national reconciliation and nation building in South Africa.
Zuma must come clean - De Klerk